लकडाउनमा घरमा बसेर वाक्क हुनुभयो ? यसरी गर्नुहोस् घरमै विपश्यना
समाज जीवनशैली समाचार
सम्झना घिमिरे काठमाडाैं, २५ वैशाख
देश कोलाहल र त्रासबाट गुज्रिरहेको छ । जताततै कोरानाको त्रासले मानिस विक्षिप्त छन् । ४२ दिनभन्दा बढी भइसक्यो, संसार घरभित्रै निस्सासिएको ।
यस्तो अवस्थामा बुद्ध जयन्ती तपाईंलाई बुद्धमार्गमा हिँड्ने सुवर्ण अवसर हुन सक्छ । आज बुद्ध जयन्ती । शान्तिका दूत बुद्धले दिएका केही शिक्षामध्ये आज हामी कुरा गर्न गइरहेका छौँ- विपश्यना ध्यान ।
नेपालमा थोरैले मात्र यसकाे लाभ लिँदै आएका छन् । विपश्यना ध्यानकाे सुरुवात नेपाली नागरिक सिद्धार्थ गौतम बुद्धले २५ सय वर्षअगाडि नै गरे पनि नेपालमा अझै यसबाट लाभ उठाउन सकिएकाे छैन ।
लकडाउनले विक्षिप्त भएको मनलाई विपश्यनाको मद्दतबाट सजिलै शान्त बनाउन सकिने हुनाले तपाईंले घर बसेरै विपश्यना गर्न सक्नुहुनेछ । त्यसका लागि पहिले विपश्यना के हो, त्यो जान्नुपर्छ ।
के हो त विपश्यना ?
विपश्यना एउटा ध्यान हो । जुन अन्तरमनको गहिराइमा पुगेर आफैँलाई सुषुप्त अनि सूक्ष्म ढंगले अवलोकन गर्ने एउटा प्रक्रिया हो । यसमा तपाईंले आफ्नो शरीरलाई कणकणमा छुट्याएर अवलोकन गर्न सक्नुहुनेछ । अर्थात् आफूभित्र गहिरिएर आफैँलाई चिन्न सक्नुहुनेछ ।
परापूर्वककालमा ऋषिमुनिहरूले यो विपश्यना गर्ने गरे पनि अहिलेसम्म आइपुग्दा यो एउटा उपचारात्मक विधिसमेत बनेको छ । यसले मनोरोगी र डिप्रेसनका बिरामीलाई पनि लाभ हुने गर्दछ ।
यो २५ सय वर्षअगाडि सिदार्थ गौतम बुद्धले विपश्यनाको सुरुवात गरेका थिए भन्ने किंवदन्ती छ । उनैले दुःखबाट मुक्तिका लागि दुःख निरोध गामिनी प्रतिपद मार्गको रूपमा विपश्यना प्रयोगमा ल्याएको भन्ने पौराणिक कथन छ ।
विपश्यनामा बुद्धद्वारा व्याख्या गरिएको आर्य अष्टांगिक मार्गको व्यावहारिक प्रयोग सिकाइन्छ । यसअन्तर्गत पहिलो चरणमा शीलपालन गराइन्छ, जसबाट साधकको साधना सरल हुन जान्छ । दोस्रो चरणमा समाधि अर्थात् मनलाई एकाग्र गर्न सहज एवं स्वाभाविक श्वास–प्रश्वासमा मात्र मनलाई केन्द्रित गराइन्छ । यस साधना विधिलाई आनापान विधि भनिन्छ । तेस्रो चरणमा एकाग्र मनको माध्यमबाट आफ्नो सम्पूर्ण शरीर एवं अन्तरमनको गहिराइमा साक्षी भावद्वारा निरीक्षण गरिन्छ र यसैलाई विपश्यना साधना पद्धति भनिन्छ ।
स्थूलभन्दा स्थूल र सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म सत्य पनि बन्द आँखाबाट प्रत्यक्ष देख्न र अनुभूत गर्न सक्नु यो विधिको विशेषता हो । श्वासप्रश्वासमा ध्यान केन्द्रित गरी शरीरभित्र विद्यमान संवेदनालाई हेर्दै समतामा बसिरहनुपर्दछ । यसबाट तपाईं आफैँले आफ्नो शरीरको गतिविधिलाई सरल तरिकाले नियाल्न सक्नुहुनेछ ।
यसरी गर्न सकिन्छ घरमै बसेर विपश्यना
विपश्यना भनेको एउटा ध्यान हो । त्यसैले तपाईंले घरमा बसेर गर्दा शान्त र एकाग्रह हुन सक्ने स्थान रोज्नुहोस् । भरसक कोठमा बसेर गर्ने प्रयत्न गर्नुहोस् । विपश्यना कुनै पनि समयमा गर्न सकिन्छ अर्थात् बिहान नै गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । कोठामा बस्दा जतिसक्दो सुत्ने ओछ्यानमा बसेर नगर्नुहोस्, यसले तपाईंलाई एकाग्र बनाउन सक्दैन ।
सुरुवातमा मनलाई एकाग्र बनाउन आनापान विधिको प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसका लागि तपाईंले आफ्नो श्वासप्रश्वासकाे गति नियाल्नुपर्छ । श्वास कसरी आइरहेको छ, गइरहेको छ र श्वासले कुनकुन अंगलाई छोइरहेको छ आदि । यसरी तपाईंले मनलाई एकाग्र बनाइसकेपछि सुरु हुन्छ तपाईंको विपश्यना ।
एकाग्र मनलाई विस्तारै तपाईंले आफ्नो शरीरको अंगप्रत्यंगमा डुलाउनुपर्छ । जस्तै, तपाईंले हत्केलाबाट सुरु गर्नुभयो भने हत्केलामा ३० सेकेण्डजति मनलाई एकाग्र बनाएर हत्केलामा भएको (सेन्सेसन) लाई नियाल्नुस् र विस्तारै एकपछि अर्काे गर्दै सारा शरीरलाई नियाल्नुस् ।
यसरी तपाईंले सुषुप्त ढंगले शरीरको अनुगमन गरेपश्चात् शरीरमा भइरहेका हरेक गतिविधि नियाल्न सक्नुहुनेछ । विपश्यना गर्दा तपाईंभित्र डर त्रास पैदा हुने, मुटुको धड्कन बढेजस्तो हुन सक्छ । तर, त्यसलाई पनि नियाल्ने कोसिस गर्नुपर्छ । यसरी बन्द आँखाबाट आँखाले देख्न र महसुस गर्न सकिने शरीरका तरंगहरूलाई महसुस गर्न सकिन्छ ।
तापाईंलाई लाग्न सक्छ । महसुस गरियो, विपश्यना पनि गरियो तर फाइदा कसरी लिने त ? यो सामान्य प्रश्न हुन सक्छ सबैका लागि । यसरी विपश्यना गर्दा तपाईंले शरीर नियाल्नु मात्र हुन्न, मनलाई मस्तिष्कबाट सञ्चालन गर्न सक्नुहुनेछ । याने कि तपाईंको मन तपाईंको बसमा रहन्छ । यसको दैनिक प्रयोगले मनभित्र दबिएका पीडा, त्रास, घमण्ड, डर आदिलाई बाहिर निकालेर तपाईंलाई स्वतन्त्र बनाउने काम गर्दछ ।
कुन उमेर समूहकाले गर्ने ?
यो आफैँलाई सुषुप्त रूपले चिन्ने उत्तम उपाय हो । त्यसैले यो कुनै मनोरोगी या डिप्रेसनबाट ग्रस्तहरूका लागि मात्र नभएर सबै उमेर समूहकाले गर्ने सक्ने सजिलो विधि हो । यसमा न त कुनै भगवान्, न त कुनै धर्मको उल्था गरिन्छ । तर, याद रहोस्, यसरी तपाईंले विपश्यना गर्दा मनलाई आफ्नो अधीनबाट बाहिर जान दिनु हुँदैन ।
वास्तवमा विपश्यना १२ दिनसम्म शील पालना गरेर भिक्षुको रूपमा आफूलाई स्वीकारी मौन रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि नेपालका विभिन्न स्थानमा शिविर नै उपलब्ध छन् र शिक्षकको मद्दतबाट विपश्यना गर्न सक्नुहुनेछ । तर, तपाई नयाँ हुनुहुन्छ र लकडाउनबाट मन अशान्त भइरहेको छ भने तपार्ईले मन एकाग्र बनाउँदै खुसी हुनका लागि आनापाना विधिको प्रयोग मात्रै गर्दा उचित हुन्छ ।
आनापानाको माध्यमबाट तपाईंले त्रास भय र मनको अशान्तिलाई निराकरण गर्न सक्नुहुनेछ । यसका लागि कुनै निश्चित समय निर्धारण गरेर तपाईं ध्यानमा बस्न सक्नुहुनेछ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख २५, २०७७, १४:५४:००